एन्ड्रे ओंटोरोको लेखहरूमा Martech Zone |
द्वारा लेखहरू आन्द्रे ओन्टोरो
Andre Oentoro को संस्थापक हो Breadnbeyond, एक पुरस्कार विजेता व्याख्याता भिडियो कम्पनी। उनले ब्यापारलाई रूपान्तरण दर बढाउन, बढि बिक्री बन्द गर्न र स्प्यान्डर भिडियोहरूबाट सकारात्मक आरओआई प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ (त्यो क्रममा)।
तपाईंले सम्भवतः अv्गुरको माध्यमबाट सुन्नुभएको छ कि भिडियोहरू उनीहरूको अनलाइन उपस्थिति सुधार गर्न खोज्ने कुनै पनि व्यवसायको लागि उचित लगानी हुन्। यी क्लिपहरू रूपान्तरण दर बढाउनमा उत्कृष्ट छन् किनकि तिनीहरू श्रोताहरूलाई संलग्न गराउन र प्रभावकारी तरिकाले जटिल सन्देशहरू सुनाउने काममा उत्कृष्ट छन् - के माया छैन? त्यसोभए, तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि कसरी तपाईं आफ्नो भिडियो मार्केटिंग अभियान किकस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ? एक भिडियो मार्केटिंग अभियान एक विशाल प्रोजेक्ट जस्तो देखिन्छ र तपाइँलाई के थाहा छैन